Menu CSS mamaly 9 hanome ny hakanton'izy ireo lehibe ny tranokalanao Famoronana an-tserasera
Menus CSS 9 miaraka amina famolavolana mandray andraikitra ankehitriny
Manohy amin'ny famoahana iray hafa ireo famolavolana tranonkala miaraka amin'ny a lisitra tsara amin'ny menus CSS miaraka amina endrika mamaly. Andiana menus CSS natokana manokana ho an'io endrika io izay matetika tsy mihoatra ny 768 santimetatra ary mamela antsika hanana ny tranokalanay vonona ny hidiran'ny mpitsidika avy amin'ny finday avo lenta.
Ny marina dia ny tsirairay amin'ireo menus CSS 9 miaraka amina endrika finday ho hitanao etsy ambany tena kanto izy ireo ary izy ireo dia manana andiana sarimiaina sy famolavolana kalitao sy antsipiriany avo lenta. Aza adino koa ity andian-dahatsoratra boribory manana endrika miavaka ity mba hanehoana ireo fizarana samihafa amin'ny tranokalanay.
1 Menio finday tsotra
2 Menu menio finday mahagaga
3 Navigation app
4 Sarimiaina fitetezana finday
5 Hevitra momba ny fitetezana SVG UI
6 Fampahalalana momba ny antsipiriany sy ny fitetezana
7 Fizarana Gooey finday
8 Frosty Nav «Toggle» vokany
9 Mobile Menu
Menio finday tsotra
Menu tsotra ho an'ny finday misy ny famoronana vao haingana ary mitondra antsika mivantana amin'ny fenitry ny famolavolana tranonkala ankehitriny ho an'ny finday. Menio feno valiny feno amin'ny fampiasana Bootstrap 3.x, FontAwesome, CSS flexbox, ary CSS BEM Syntax. Menu tsotra izay natao tsara ary mifototra amin'ny fahatsorany mba ho deraina.
Menu menio finday mahagaga
Ny menus Mega dia ahafahantsika manampy tsanganana, widgets ary ireo singa rehetra ilaina amin'izany mivantana ny tranokalanay Web. Ity menio lafin-kafatra ho an'ny smartphone ity dia tena tsotra ary ho hitanao ny faritra rehetra amin'ny sehatra tokana ampiasainao miorim-paka.
Miatrika menio mamaly izay foto-kevitra bebe kokoa izahay. Raha mitady zavatra ianao tsy mitovy amin'ny fenitra ankehitriny Amin'ny menus finday, mety mety tsara ity menio ity. Avy amin'ny kisary hamburger dia azonao atao ny manitatra ireo andiana kiheba ahafahanao miditra amin'ireo pejy rehetra ao amin'ilay tranonkala.
Sarimiaina fitetezana finday
Ity menio mamaly ity dia tsy mitovy amin'ny ambiny amin'ny iray hafa mihoatra ny sary mihetsika mahafinaritra satria izahay manery ny menio hamburger amin'ny famolavolana diagonal. Izy io koa dia mandany sarimiaina ao amin'ilay mpisafo hover mba hanomezana azy io dynamism bebe kokoa. Ampiasao amin'ny sary mihetsika GSAP TantaraMax sy TimelineMax.
Hevitra momba ny fitetezana SVG UI
Sarimiaina SVG sy CSS3 ho an'ny menio tena izy izay mitondra anao mankany amin'ny tetezamita tena mamorona ary miavaka amin'ireo ambin'ny menus responsive amin'ity lisitra ity. Miavaka noho izany loko lehibe ary ho an'ny vokany lehibe azony omena amin'ny habakao Internet izany rehefa jerena amin'ny fitaovana finday toy ny takelaka.
Fampahalalana momba ny antsipiriany sy ny fitetezana
Mitovy be amin'ilay teo aloha tamin'ny famolavolana sy ny fampiasana loko, farafaharatsiny amin'ny endriny voalohany, fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy mitovy amin'ny menio boribory mamaly izay hita eo amin'ny sisin'ny efijery. Milamina be ireo sary mihetsika ary menio mamaly iray hafa miaraka amina fikitika lehibe hahatonga ny tranokalanay hiavaka amin'ny finday na takelaka.
Fizarana Gooey finday
Ity dia «Gooey» effets izay napetraka tsara amin'ny menio fampiasa finday izay miankina amin'ny tetezamita CSS sy jQuery ho an'ny sarimiaina. Izy io dia momba ny andiana bokotra misokatra rehefa tsindrio ny kisary hamburger izay ananantsika eo afovoan'ny faritra ambany amin'ny efijery. Iray amin'ireo menus mamaly gimikicky izay mbola tena mandeha ankehitriny.
Frosty Nav «Toggle» vokany
Ity menio mamaly ity dia manandrana mampihatra a sary mihetsika tsara rehefa manindry ny bokotra isika hamburger. Ny vokany dia manjavozavo ka manjary manjavozavo ny ambadiky ny efijery ary azontsika atao tsara ny manavaka ireo fizarana tsirairay handalovan'ireo mpitsidika ny tranonkalantsika. Manana sary mihetsika tsotra ho an'ny sokajy tsirairay izahay nefa tsy dia misy mpankafy, fa misy vokany lehibe.
Nahavita ity andiany an'ny menus mamaly finday miaraka amina kalitao tena tsara. Raha tsy hadino aloha fa afaka mandeha mamaky andian-jiro hafa ianao hanavahana ny tranonkalanao, ireto fotsiny amin'ny efijery feno.
Mobile Menu dia iray amin'izany dia miavaka amin'ny vokan'ny jQuery ary namboarina tamina HTML na CSS. Tsotra ihany amin'ny endriny, saingy azo antoka fa afaka manome an'io fikitihana premium io amin'ny tranokalanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Menus CSS 9 miaraka amina famolavolana mandray andraikitra ankehitriny
Wacom dia manolotra ny katalaoginy vaovao any Espana: Wacom Intuos vaovao, Cintiq Pro 24 sy maro hafa
Menu CSS sidebar 9 tsy azonao adino